ပြသခြင်းတွင် Podcast လှုပ်ရှားမှု 2019 | NAB သတင်းများ | 2021 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » ပြကွက်တွင် podcast လပ်ြရြားမြ 2019
ပြကွက်တွင် podcast လပ်ြရြားမြ 2019
မှာနထေိုငျ ရိုအခါရေယုံ Creek အဘိဓါန်ဟိုတယ် Orlando တွင်ဖလော်ရီဒါရှိအဖြစ် podcasts လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ 2019 (PM19) ဆဲ။ နာရီအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲဒီနေရာမှာနှစ်စဉ် podcasting တင်ဆက်မှုအကြီးမားဆုံးဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုအတူတကွစုရုံးလာကြပြီးဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာရှိတဲ့ podcasters တွေနဲ့ပြည့်နေလိမ့်မယ်။ သင်က podcaster တစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် PM 19 ဆိုတာနေရာပဲ။ ဤတွင် podcasters များသည် podcasting အသိုင်းအဝိုင်း၏အကြီးမားဆုံးနှင့်သြဇာအရှိဆုံးအမည်များမှတွေ့ဆုံခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်သင်ယူနိုင်လိမ့်မည်!
Guy Raz, ငါဒီတည်ဆောက်မည်သို့၏ Co-ဖန်တီးသူနှင့်ကို TED ရေဒီယိုနာရီ။
ဒါအမှန်ပဲ! ဒီကနေ့ငါးရက်မှသောကြာနေ့အထိ PM19 ကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမည် TED ရေဒီယိုနာရီ Guy Razနှင့် 4,000 ကျော်တက်ကြွသူတို့အဘယ်သူမျှမ Podcasts လက်လွတ်ချင်ပါလိမ့်မယ်သုံးနှစ်ခွဲရက်ညတစ်ခုအံ့သြဖွယ်ဖြစ်လတံ့သောအရာကိုအဘို့အလှည့်ပတ်ကိုစုသိမ်းကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ Podcasts, စက်မှုလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် podcasting အပြစ်တွေအယောင်ဆောင်အတူ။
PM 19 ဟာ podcasters တွေအတွက်ဟော့စပေါ့။ ဒါ့အပြင်သင်ကလူသစ်တွေကသင့်အသံနဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းကိုအတူတကွစုစည်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင် Podcast လုပ်ငန်းမှာကောင်းချီးခံစားခဲ့ရတဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုအကောင်းဆုံးအသံတွေကိုစုစည်းဖို့ PODCAST MOVEMENT ရဲ့မစ်ရှင်မှာပါ ၀ င်ပါ။
Shannon Cason, Host ကများနှင့်အိမ်လုပ်ပုံပြင်၏ထုတ်လုပ်သူ
co-ထုတ်လုပ်သူ, co-အိမ်ရှင်, co-ဖန်တီးသူ, နား Hustle
ဖန်ဆင်းရှင် Podcast တခုကို Lore Hit နှင့် The ကမ္ဘာ့ဖလား Lore ၏စာအုပ်စီးရီး Author
သာ pm တွင် 19 မှာသငျသညျဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်ကဲ့သို့သောအရှိဆုံးအံ့သြဖွယ် podcasting ခွက်အချို့ထံမှသင်ယူဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မယ် Shannon Cason, Nigel ညံ့ဖျင်းနှင့် အာရုန်သည် Mahnkepodcasters များတီထွင်မှုမှသည်အံ့သြစရာကောင်းသောသင်ခန်းစာများမှတစ်ဆင့်၎င်းတို့၏ podcasts များကိုမည်သို့ကြီးထွားနိုင်ကြောင်းလေ့လာရန်ကူညီပေးသောအဓိကဟောပြောချက် ၁၀၀ ကျော်၊ breakout ပြုလုပ်သည့်အစည်းအဝေးများနှင့် panel ဆွေးနွေးမှုများတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းမှအနုပညာရှင်များစွာနှင့်အတူတကွပေါင်းသင်းခဲ့သည်။ podcast ကိုဘယ်လိုပိုက်ဆံရှာရမယ်၊ ဘယ်လိုပို့တဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုလာမယ့်မျိုးဆက်သစ် podcaster တွေပေါ်ပေါက်လာစေမလဲ၊ စည်းလုံးညီညွတ်စေဖို့၊ လှုံ့ဆော်ရန်နှင့်သံသယဖြစ်စရာမလိုဘဲ PODCAST MOVEMENT ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဖော်ပြမည်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပွင့်နေတုန်းပဲ၊ မင်းမှာအချိန်ရှိနေသေးတယ်။ ဒါကြောင့်သင်က podcaster တစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ယောက်တည်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကြားရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသံကိုမတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။ သွားပါ 2019.podcastmovement.com နှင့် Shingle Creek ဟိုတယ်သို့ဆင်းလာကြပြီး၊ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်နေသည့်အသံလွှင့်ရုံအသံလွှင့်ရုံမှကမ္ဘာကြီးသို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီး၎င်းတို့၏အသံကိုမြှင့်တင်နိုင်မည့်အစဉ်အမြဲတိုးတက်နေသောအသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှအဖွဲ့ဝင်အသစ်များကိုပါ ၀ င်ရန် ၀ န်ကြီးချုပ် ၁၉ ရက်တွင်ပါ ၀ င်ပါ။ PM 19 မှာတွေ့မယ်။
ပွပှဲ Guy Raz PM19 podcasts လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ 2019-08-13
ယခင်: Blackmagic ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ "တပ်ဦးနှင့်မြစင်တာ" က Ultra HD မှာပို့ပြီးတိုက်ရိုက်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် HDR
နောက်တစ်ခု: wTVision ပနားမားရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းတိုးပွားလက်တွေ့ဘဝလုပ်ငန်းခွင်များအတွက် Ultimatte အပေါ်မှီခို